mardi, 08 mai 2018 22:48
Ihosy: Rongony amin’ny gony maro tra-tehaky ny Polisy
Fiara tsy mataho-dalana miisa telo no nitondrana azy ireo no sarona nandritra ny fisavana nataon’ny mpitandro ny filaminana teto Ihosy androany tolakandro.
Ny famotorana no hamantarana ny tompony, ny toerana nihavian’ireo rongony sy ny hitondrana azy ary ny amin’ireo fiara.
mardi, 08 mai 2018 22:38
Ambatondrazaka: Nanatevin-daharana ny Hetsiky ny fanovana ny mpianatra
Mpianatra avy ao amin'ny LTP sy CEG Razaka ary LRN ireto nanatevin-daharana ny Hetsiky ny fanovana ireto androany.
Mizarazara ny hevitry ny ray aman-dreny eto an-toerana manoloana ny tranga.
mardi, 08 mai 2018 22:33
Mondial 2018: Seuls 32 des 64 matches seront diffusés en direct sur TVM/RNM
Et cela aurait coûté 250.000 euros au Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Cette compétition planétaire se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.
mardi, 08 mai 2018 22:30
Instruction-775-2018 sur les manifestations publiques
Manifestations publiques à caractère politique: Instruction du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
Selon cette correspondance, toutes manifestations à caractère politique dans les salles et les lieux clôturés sont autorisées mais elles doivent faire l’objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du représentant de l'Etat territorialement compétent.
mardi, 08 mai 2018 14:26
Sambava: Tany 52ha miteraka savorovoro
Nangataka ireo mponina mba handraisan’ny Fanjakana fanapahan-kevitra maika ny hanomezana ny tany ho an’ny vahoaka.
Tany manana velarana 52ha no miteraka olana eto Andranoalanana. 7ha amin’io no voalaza fa lasan’ny mpanam-bola saingy tsy izay no miseho hoy ny mponina fa dia nofefeny tamboho ao avokoa ny tany manontolo.
Tonga taty an-toerana noho io olana io ny mpanolontsain’ny praiminisitra, Raholiniarivo Solonavalona Paolo Emilio, saingy manahy ny maro sao ho fampanginana politika no nahatongavany satria raha zohina ny tantara dia tsy misy sahy mikitika ity tany ity ireo solontenam-panjakana eto an-toerana fa ny misambotra sy mandefa olona any am-ponja no nisy hatramin'izay.
mardi, 08 mai 2018 14:12
Fanafihana Masera tao Ambano: Basy kilalao no nampiasain’ireo jiolahy nandrobana vola vidin-kisoa
Ny alin'ny alatsinainy hifoha ity talata 8 mey ity no nisehoan’ny fanafiana ny Tobin-dry Masera Lasalety tao Ambano-Antsirabe II, izay toeram-piompiana sy fambolena izy io. Jiolahy niisa fito ary nitondra basy kilalao sy kibay no nanafika.
Nofatoran'ireo jiolahy ny mpiambina ary novakian'izy ireo ny varavaram-by nidirana tao an-trano. Noteren’ireo jiolahy hamoaka vola 20 tapitrisa ariary ry Masera. Noheverin’ireo jiolahy fa mitazona ny vola azo nandritra ny Kerimesin’ny Fiangonana ny faran’ny herinandro teo ireto masera ireto ka izany no tena notadiavin’izy ireo raha ny fanazavan’ireo Relijiozy.
CENI: Manery ny rehetra andravona ny olana politika alohan'ny faran'ny volana mey 2018
Nampiantso ny mpanao gazety io maraina io, tetsy Nanisana ireo mpikambana ao amin'ny Komity mahaleotena momba ny fifidianana, na ny CENI.
Napetrak'izy ireo tamin'izany fa tsy maintsy vahana alohan'ny faran'ity volana mey ity izay olana politika, mba ahafahana miroso ankahalalahana sy ampitoniana amin'ny fifidianana Filoham-pirenena.
Ka takiana ho faritana amin'izany:
- Ny Lalàm-pifidianana;
- Ny fametrahana fitoniana hiatrehana fifidianana;
- Ny tetiandro momba ny fifidianana.
Nisy soso-kevitra 3 azo isafidianana anefa naroson'izy ireo, izay samy manaja ny Lalampanorenana avokoa:
mardi, 08 mai 2018 13:38
CENI: Fin Mai 2018, date buttoir règlement de conflit politique
Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ont tenu une conférence de presse, à Nanisana, ce matin 08 mai 2018, durant laquelle son président a proposé 3 scénarios pour sortir de cette crise pré-électorale:
mardi, 08 mai 2018 11:56
Sambava: Nidoboka am-ponja ilay mpampianatra nametaveta ankizivavy 13 taona
Mpianany ihany, izay kilasy T4, ao amin'ny ZAP Antsahavaribe, CISCO Sambava, no niharan’ity fanararaotana ara-nofo ity.
Niaiky ny zavatra nataony ramose, saingy nangataka ny mba hanaovana raharaham-pihavanana ka hanolotra omby iray ho an’ny Ray aman-dren’ilay ankizivavy, fa tsy nety ireto farany fa nitondra ny raharaha tao amin’ny Ben’ny Tanàna Antahavaribe, ary ity indray nandefa azy teo anivon'ny mpitandro ny filaminana mifehy ny faritra misy azy, dia ny Zandarimaria Amboangibe.
Natolotra ny Fampanoavana Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha omaly alatsininy 07 mey 2018, taorian’izay no nivoahan’ny didy savaranonando itazomana azy am-ponja vonjimaika miandry ny fitsarana azy.